Site na Italia Trasporto Aereo ụgbọ elu gaa ụgwọ ọrụ nke iguzosi ike n'ihe nke Alitalia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Site na Italia Trasporto Aereo ụgbọ elu gaa ụgwọ ọrụ nke iguzosi ike n'ihe nke Alitalia
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Gịnị na-eme ụgwọ ọrụ iguzosi ike n'ihe nke Alitalia?
Ná mmalite nke ọhụrụ Italia Trasporto Aereo (ITA) - nke a na-akpọbu Alitalia - ihe omume, ITA ga-arụ ọrụ n'ụgbọ elu nke ụgbọ elu 52, 7 n'ime ha sara mbara na 45 dị warara. Ma gịnị ga-eme ụgwọ ọrụ iguzosi ike n'ihe nke Alitalia na mgbanwe ahụ?
Onye isi oche nke ụgbọ elu ọhụrụ ahụ, Fabio Lazzerini, kwadoro na nnọkọ ogbako na ụgbọ elu ahụ ga-eto ụgbọ elu 78 na 2022.
Mmụba a ga-eweta ụgbọelu iri abụọ na isii ọzọ nke isii ga - abụ obosara na ahụ dị warara 26.
Kedu ihe ga - eme Alitalia nkwụsi ike ụgwọ ọrụ mgbe ụgbọ elu mba ọhụrụ ga - apụ?
Lazzerini kwuru, sị: “Site na 2022, anyị na-atụ anya ịmalite iwebata ụgbọ elu ọgbọ ọhụrụ na ụgbọ mmiri, nke ga-eji nwayọọ nwayọọ dochie ụgbọelu teknụzụ ochie. Na njedebe nke 2025, ụgbọ mmiri a ga - eto ruo 105 (23 sara mbara na ahụ dị warara 82), yana ụgbọ elu ọgbọ ọhụrụ 81 (ya na 77 pasent nke ụgbọ mmiri niile) nke ga - ekwe - na ebumnuche nke newco - ka ọ pụta ìhè belata mmetụta gburugburu ebe obibi na ebuli arụmọrụ na ogo nke onyinye a. ”
AKW LKWỌ LLỌ IWU
ITA na-ekwu ọfụma na Alitalia MilleMiglia - Gini mere na isi na kaadị Alitalia?
Kaadị ntụkwasị obi gbanwere site na Alitalia ke ITA A na-eme atụmatụ maka etiti Ọktọba mgbe Alitalia na-akwụsị ife efe na ITA ọhụrụ (Airtali ụgbọ njem Italytali) malitere, nke ga-ahapụ naanị ụgbọ elu 52. Dị ka ọhụrụ CEO, nke a bụ iji “mpi.” O kwuru na n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ụgbọ elu ka ukwuu, "ụgbọ elu ole ka ha na-efe ugbu a?" Lazzerini na-ekwu, nyere nsogbu COVID, enwere ole na ole.
Lazzerini kọwara, sị: “Iji zere imefu ego niile gọọmentị Italiantali, anyị ahọrọla iji nwayọ nwayọ jikọọ ọnụ ọgụgụ nke okporo ụzọ a tụrụ anya na ọnwa ndị na-abịanụ. Ọ bụrụ na ụdị dị iche iche adịghị eduga na mmechi ọhụụ, ụlọ ọrụ a ga-amụba ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu [ruo 78 na 2022] na mmụba nke okporo ụzọ. ”
Kedu ihe na-eme Kaadị MilleMiglia nke Alitalia?
European Commission kpebiri na Alitalia Loyalty, ụlọ ọrụ na-elekọta usoro iguzosi ike n'ihe nke ụlọ ọrụ “tali "MilleMiglia," ka a ga-eresị onye na-ere ahịa kachasị elu site na ọmịiko ọha na eze, nke na-emeghe ma meghee ndị niile nwere mmasị. Mana ITA, ụlọ ọrụ ụgbọelu ọhụrụ, agaghị enwe ike isonye na ọmịiko a dị ka ihe ịrịba ama nke nkwụsị n'etiti ụlọ ọrụ 2. Kaadị MilleMiglia ahụ na-agbasa ga-ejedebe na onye nwe ọhụụ nke amabeghị na onye nwekwara ike ịrụ ọrụ na mpaghara ọzọ na-abụghị ụgbọ elu ụgbọelu.
Kedu ihe ga - eme site na Ọktoba 15, 2021?
Onye zụrụ ihe omume ahụ nke iguzosi ike n'ihe ga-ekpebi otu esi eji ọdọ mmiri gbara agba nke ndị otu ahụ gbakọtara (ihe dị ka nde 5). Ebe ọ bụ na kilomita ndị a bụ ụgwọ maka ndị na-elekọta ihe omume ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ị hụ otu esi 'akwụghachi' ya. Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ọhụrụ nke iguzosi ike n'ihe ga-abụ, dịka ọmụmaatụ, nnukwu ụlọ ahịa, ọ nwere ike ịgbanwe kilomita ndị ahụ ka ọ bụrụ ụgwọ ego ịzụ ahịa, Lazzerini kwuru.
Ahụmahụ ya gbasara ụwa niile kemgbe 1960 mgbe ọ dị afọ 21 ọ malitere nyocha Japan, Hong Kong, na Thailand.
Mario ahụla ka njem nlegharị anya nke ụwa na -etolite ruo ugbu a wee hụ
Akwụkwọ ikike onye nta akụkọ Mario bụ nke “National Order of Journalists Rome, Italy na 1977.
N’ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ niile ị chọrọ bụ ịhụnanya
Ndị njem nlegharị anya na Hawaii: Anyị chọrọ ịhụ obere gị
Abalị maka na ya na kpakpando ihe nkiri, ọmarịcha ụwa nke ...
P&O Cruises Australia gbatịpụrụ na Sydney na ...
COVID Pass maka ndị njem na-abụghị EU ewepụtara na France
Lufthansa na-ewebata azịza IT maka nkwado ...
Ya na BMK, Afrịka njem nlegharị anya nke Afrịka furu efu
Ngalaba Ọchịchị US: Agala Canada
Egburu ndị njem ụgbọ oloko 12, 5 merụrụ ahụ na idei mmiri ...
Heathrow: Mmechi nke Transatlantic Flights Costing UK ...
Gaa na Britain UGBUA ma ọ bụrụ na a gbara gị ọgwụ. Onye isi oche ETOA Tom ...
Okwu Eswatini Kwadoro site na mmadu niile
Ndị ngagharị iwe wakporo Beirut bank, 'tọhapụ' ...
“Akpụkpọ ụkwụ Swipe-Stakes” maka di na nwunye hụrụ ịhụnanya ...
Zụọnụ + Ikuku: Air France kwughachiri nkwa na ...